I-Smartwatch - Gadget News | Izindaba zegajethi (Ikhasi 2)
Ngaphezu kwe-iPhone 11, abafana baseCupertino nabo baveze ukuvuselelwa okulindelwe isikhathi eside kwe-iPad 2018 ne-Apple Watch Series 4. Sikukhombisa zonke izindaba abasinika zona.
Thola ububanzi obusha be-smartwatch nge-Wear OS i-Fossil eyethule ngokusemthethweni ku-IFA 2019 kuleli sonto eBerlin.
I-Puma Smartwatch: I-smartwatch yomkhiqizo ene-Wear OS
I-Puma Smartwatch: I-smartwatch yomkhiqizo ene-Wear OS. Thola okuningi mayelana nokwethulwa kwale washi ku-IFA 2019.
I-Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition: I-New Watch Edition
Thola konke mayelana ne-Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition, uhlobo olukhethekile lwewashi le-Samsung esethulwe ngokusemthethweni.
I-Galaxy Watch Active 2: I-smartwatch esisha se-Samsung
Thola konke mayelana ne-Galaxy Watch Active 2, iwashi elisha le-Samsung, eselivele lethulwe ngokusemthethweni futhi elizofika kungekudala.
UFossil wethula isizukulwane sakhe esisha samawashi nge-Wear OS
Thola okuningi mayelana nohlu olusha lwamawashi we-Fossil asebenzisa i-Wear OS njengohlelo lokusebenza futhi aseveziwe ngokusemthethweni.
Thola imininingwane ephelele ye-Samsung Galaxy Watch Active, i-smartwatch esisha esivela kuhlobo lwaseKorea olwethulwe ngokusemthethweni.
Amavidiyo amafushane ayisithupha e-Apple Watch nemisebenzi yayo eminingana
Uma ungakaqiniseki ukuthi i-smartwatch yenzelwe ini nokuthi yenzani, kulesi sihloko sizochaza konke okuphathelene nalawa madivayisi.
I-Apple Watch Series 4 isivele isemthethweni: Yazi zonke izindaba zazo
Uchungechunge lwe-Apple 4: Imininingwane, intengo nokwethulwa ngokusemthethweni. Thola konke mayelana nesizukulwane esisha samawashi e-Apple.
I-Galaxy Gear S4 noma i-Galaxy Watch izokwethulwa ngo-Agasti
Konke sekuhleliwe futhi kubonakala sengathi amawashi amasha smart enkampani yaseNingizimu Korea azobona ukukhanya ku ...
"Vala izindandatho zakho" umkhankaso wesikhangiso we-Apple Watch
Futhi sinezimemezelo ezintathu ze-Apple ezihlobene nomsebenzi womzimba nokuvala izindandatho nsuku zonke ...
Ibukeka kanjena i-smartwatch esisha esivela ku-Emporio Armani
Ifemu yaseArmani ibilokhu ihlotshaniswa nemfashini, kepha ezikhathini zakamuva, futhi ngenxa yokwanda kwamawatchwatches, inkampani ibifuna ukungena enkampanini yezemfashini i-Armani, yethule isizukulwane esisha se-smartwatch sabathandi benkampani nezemidlalo jikelele.
Amadili amahle nge-Amazon Prime Day 2018
Namuhla ngolunye lwezinsuku ezilindelwe kakhulu zonyaka, kanye neBlack Friday, okungenani ababhalisile ...
AbakwaSamsung bazokwethula i-Galaxy Note 9 neGear S4 ngokuhlanganyela ekuqaleni kuka-Agasti
Amahlebezi akamuva mayelana nosuku okungenzeka lwethulwe ngalo i-Galaxy Note 9 asikisela ukuthi kuzoba ngasekuqaleni kuka-Agasti nokuthi izofika neGear S4
IMatrix PowerWatch X, iwashi lokuqala elibonakalayo elisebenza ngokushisa komzimba wethu
IPowerWatch X isiyathengiswa, iwashi lokuqala elibukhali emakethe elisebenzisa ukushisa komzimba wethu njengomthombo wamandla
I-watchOS 5: zonke izindaba ongazijabulela kungekudala ku-Apple Watch yakho
I-watchOS 5 yisibuyekezo esisha se-Apple Watch esizofinyelela kubo bonke abasebenzisi ngoSepthemba ozayo. Sichaza konke ukuthuthukiswa okungeziwe.
Ngabe kuzoba njalo iXiaomi Mi Band 3?
Sekudlule isikhathi eside ukwethulwa kweXiami Mi Band 2, inkampani yaseChina yavumela ukuba kudlule isikhathi eside phakathi ...
Le kungaba yiwatchwatch obukade uyilindele ukuyithenga
Ama-Smartwatches afike emakethe ngenxa yePebble engasasebenzi, inkampani ebingakwazi ukuzivumelanisa ne ...
IFitbit Versa entsha isiyathengiswa manje
Ezweni lethu, iwashi leFitbit Versa manje seliyatholakala ukuze lithengwe nakwamanye ...
I-Android Wear izoshintsha igama layo libe yi-Wear OS
Emasontweni ambalwa, uhlelo lokusebenza lwe-Android Wear, kanye negama lohlelo lokusebenza olulawula inani elikhulu lamawatchwatches, kuzobizwa nge-Wear OS.
Le yi-smartwatch ebiza kakhulu emhlabeni
Umkhiqizi waseSwitzerland u-Tag Heuer wethule ku-Tag Heuer Connected Full Diamond, imodeli ehlanganisa amadayimane angama-589 asakazeke azungeze umqhele nebhande lale divayisi futhi intengo yayo iphunyuka ngaphezu kwengxenye yabantu abafayo.
AMABHODI, iwashi le-modular liyaqhubeka ukuthengiswa ngemuva kweminyaka yokusebenza
Iwashi le-modular BLOCKS liyathengiswa futhi lizothunyelwa kubasebenzisi kwikota yokuqala ka-2018. Intengo yalo iqala kuma-euro angama-220
ICasio isayinela ama-smartwatches, kepha ngendlela yayo
ICasio yethule uhlelo olukhethekile lohla lwayo oludumile lwe-G-Shock olufaka phakathi kwezinye izinto ukuxhumeka kwe-GPS nokuzimela ngenxa yelanga.
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Samsung Copilot, sizokugwema ukulala esondweni
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Samsung Copilot, amathuba okulala esondweni anciphile uma sine-smartwatch ehambisanayo.
Isidingo samawatchwat smart sanda ngaphezu kuka-100% ngoKhisimusi
Kubukeka sengathi izinsuku esikhokha kuzo maqondana nokuthengiswa kwamadivayisi we ...
Lawa 'ama-smartwatches' azobuyekezela ku-Android 8.0 Oreo
I-Google ishicilele uhlu lwama-smartwatches asuselwa ku-Android Wear azothola isibuyekezo ku-Android 8.0 Oreo. Sikushiya uhlu oluphelele
IGermany ivimbela ukuthengiswa kwe-smartwatch eyenzelwe izingane ezineminyaka ephakathi kwemihlanu nengu-5 ubudala
Futhi ubuchwepheshe ukuthi akusona isixazululo ngaso sonke isikhathi futhi njengoba kukhonjiswa ezikhathini ezingenakubalwa kuyadingeka ...
Izinkinga ezintsha ze-Apple Watch Series 3
Futhi i-Apple Watch Series 3 inika izinkinga kubasebenzisi abayithengile. Ngalesi sikhathi inkinga ithinta isikrini.
I-Fossil yethula ama-smartwatches ama-hybrid amabili amasha kubabukeli besifazane
Abafana abavela kuFossil basanda kukhulisa ikhathalogi yabo yama-smartwatches e-hybrid futhi, bethula izinhlobo ezimbili zabesifazane.
Isigaba se-Android Wear siyanyamalala esitolo se-Google
Kungekudala ngemuva kokwethulwa kwePixel 2 entsha, inkampani ezinze eMountain View isuse konke okubhekiswe kuma-smartwatches esitolo sayo
I-SPC yethula amawashi amabili amasha ngentengo eyehlisiwe, iSmartee Pop neMidlalo
ISmartee Pop neSmartee Sport izindlela ezimbili ezithakazelisa kakhulu ezinezici ezihlabayo, ake sizazi kancane.
UGarmin Vivofit Jr 2 uyisongo lokulinganisa labancane
Akukephuzi kakhulu, noma kusenesikhathi kuleli cala. Namuhla sizokhuluma ngomkhiqizo oyingqayizivele ...
I-Apple imisa amamodeli amaningi we-Apple Watch aqinisekisa ukufika okuseduze kwe-Apple Watch Series 3
I-Apple imise ezinye izinhlobo ze-Apple Watch yayo, iqinisekisa ukuthi namuhla singabona i-Apple Watch Series 3 entsha.
Izinhlobo ezintsha zama-smartwatches kaMichael Kors manje aseyatholakala emakethe
Inkampani yokunethezeka uMichael Kors uvuselele uhla lwayo lwamawashi ahlakaniphile, wethula amamodeli amabili amasha: iSofie neGrayson.
I-iPhone X ngeke ifike yodwa futhi i-Apple Watch Series 3 izoba yinto yangempela kusasa
Ukuvuza kwekhodi ye-iOS 11 kusivumele sazi ukuthi i-iPhone X entsha ngeke ifike yodwa, futhi izohambisana ne-Apple Watch Series 3.
ISamsung Gear Sport entsha isivele isemthethweni futhi ifika ilayishwe izindaba ezimnandi
Emizuzwini embalwa edlule, abakwaSamsung bethule ngokusemthethweni iGear Sport entsha ku-IFA 2017, i-smartwatch ecabanga abadlali nabagijimi.
ISamsung Gear Sport entsha ingabonakala ebhodini lokukhangisa ngaphambi kokuthi yethulwe ngokusemthethweni ku-IFA 2017
IGear Sport entsha ibonwa ngaphambi kwesikhathi, iqinisekisa ngokusemthethweni ukuzibophezela okucacile kweSamsung kuma-smartwatches.
USepthemba 12 kungaba usuku olukhethwe yi-Apple ukwethula i-iPhone 8
Abafana baseCupertino bangethula i-iPhone 8 entsha ngoSepthemba 12, ngokusho kwewebhusayithi yaseFrance iMac4Ever.
AbakwaSamsung Gear Fit2 Pro bazoba umlingani ophelele kwi-Samsung Galaxy Note 8
AbakwaSamsung sebenomlingani we-Samsung Galaxy Note 8 ngo-Agasti 23: i-Samsung Gear Fit2 Pro, egqokwa ngokulandelayo
Ngalolu hlelo, uFitbit ufuna ukuthola isikhundla sokuqala ekuthengiseni emakethe yokugqoka
Okugqokwa okulandelayo kukaFitbit, kukhombisa ukuthi kungakwazi ukukala izinga le-oxygen egazini, kube yi-smartwatch yokuqala yokwenza lokho.
IGarmin VivoActive 3, kuvela izithombe zokuqala zale 'wearable'
Umkhiqizo olandelayo weGarmin ogxile ekuqapheni umsebenzi utholakele. Le yiGarmin VivoActive 3
I-Apple ingaqala i-Apple Watch ngokuxhumeka kwe-LTE
I-Apple ingaqala i-Apple Watch ezimele ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka. Lokho, imodeli engadingi i-iPhone ukuze isebenze
ILouis Vuitton yethule i-smartwatch sayo esisha esiyiqambe ngokuthi yiTambour Horizon futhi esizobiza ngentengo engama-euro ayizi-2.450.
AbakwaSony bethula i-FES Watch U 2, i-smartwatch eyenziwe ngokwezifiso kakhulu
I-Sony FES Watch U iyi-smartwatch eyinki ye-elekthronikhi enweba ibhande elibopha ucezu olulodwa, olukhanya kakhulu
Isifundo sendlela yokusetha kabusha i-Apple Watch kumasethingi efektri kusuka kuwashi noma i-iPhone uma ukhohlwe ikhodi yokuvula.
Isizukulwane sokuqala seHuawei Watch sibuyekezwe ku-Android Wear 2.0
Kancane kancane, inguqulo entsha yesistimu yokusebenza yamawashi wesizukulwane sokuqala we-Huawei Watch iyafika. Ku…
Sikuleso sikhathi esinzima kwezinye izicelo esizithola zitholakala ngokugqokekayo futhi ake ngichaze. Gcina isicelo ...
Amahemuhemu abeka ukwethulwa kwe-Apple Watch Series 3 ngoSepthemba
Sibona izindaba ezimbalwa ezihlobene ne-Apple kulezi zinsuku futhi ngemuva kokukhuluma nge ...
Isibuyekezo sohlelo lokusebenza lwakamuva sePebble sizovumela amadivayisi ukuthi aqhubeke nokusebenza ngokungapheli
Abafana ku-Pebble bakhiphe okuzoba isibuyekezo sakamuva kuhlelo lokusebenza le-Pebble, kuzo zombili i-iOS ne-Android.
I-Apple Watch elandelayo ingafika ne-LTE
Lawa ngamahemuhemu noma ukuvuza nge-Apple Watch entsha Apple engayilungiselela ngokusho komhlaziyi uChristopher ...
I-Samsung S3 Classic isivele inayo inguqulo ye-LTE
AbakwaSamsung bethule i-S3 Classic LTE kwa-Baseworld, imodeli eyayinoxhumano lwe-Wi-Fi kuphela
IMisfit iphinde ikhombe imfashini yesmarwatch ene-Android Wear
Inkampani yakwaMisfit yethule ngokusemthethweni i-smartwatch sayo sokuqala nge-Android Wear, iMisfit Vapor
I-smartwatch esisha sikaCasio esine-Android Wear kuzoba uhlelo olukhawulelwe
Inkampani yaseJapan iCasio isanda kwethula iPro Trek Smart WSD-F20s, iwatchwatch ecishe ifane nemodeli eyethule eCES, kodwa ngeSapphire crystal
Umkhiqizi wakamuva othathe isinqumo sokungena emakethe kanokusho yama-smartwatch yi-GC, ezokwethula imodeli entsha ekupheleni konyaka.
Izithombe zeZTE Quarz, i-Android Wear yomkhiqizo waseChina, ziyaputshuka
IZTE Quartz iyona ekhethiwe futhi izithombe zokuqala zale smartwatch zidalulwe ku-inthanethi okungabonakali zinobuchwepheshe obusha.
Ukuqagela futhi kukhomba imfashini yama-smartwatches ane-Android Wear
Inkampani yezemfashini uGuess isanda kumemezela ukuthi unyaka wonke izokwethula imodeli entsha ye-smartwatch ebizwa nge-Guess Connected
Ukudlala i-Yellow Pokémon ku-Apple Watch akunamsebenzi
I-Apple Watch ingumlingani omkhulu, kepha ... kuthiwani uma ufuna ukudlala i-Yellow Pokémon?
I-Huawei Watch iqala ukuthola i-Android Wear 2.0
I-smartwatch yokuqala kaHuawei, iHuawei Watch, isanda kuqala ukuthola i-Android Wear 2.0, kepha ngeke kube yiyo kuphela ezoyithola ezinyangeni ezizayo.
IMontblanc ijoyina imfashini yemikhiqizo yokunethezeka ukuvula ama-smartwatches
Inkampani yaseMontblanc isanda kwethula i-smartwatch sayo sokuqala, iMontblanc Summit, okuyithuluzi elizongena emakethe eliqala ngo- $ 890.
I-Swatch firm Swatch ifuna uhlelo lwayo lokusebenza lwama-smartwatches ayo
Umkhiqizi wamawashi waseSwitzerland usebenzela uhlelo lwakhe lokusebenza kuma-smartwatches akhe esikhathi esizayo
I-Fossil iqala ukukhipha isibuyekezo sama-smartwatches ayo ku-Android 2.0
Umkhiqizi uFossil usanda kumemezela nge-Twitter ukukhishwa kwesibuyekezo se-Android Wear 2.0 kuwo wonke amadivayisi ahambisanayo.
Le yi-TAG Heuer entsha exhunyiwe, i-smartwatch entsha yokunethezeka evela enkampanini yaseSwitzerland
Esikhathini esingaphezudlwana kwenyanga edlule, inkampani yaseSwitzerland yokubuka okunethezeka i-TAG Heuer yamemezela ukuthi iyasebenza ...
Isizukulwane sesibili se-TAG Heuer Connected, esethulwe ngoMashi 14
Umkhiqizo wewashi laseSwitzerland u-TAG Heuer umemezele ngokusemthethweni ukwethulwa kwesizukulwane sesibili seTag Heuer Connected
Njengoba intshisekelo yabanye abakhiqizi kuma-smartwatches incipha futhi bayayeka ukwenziwa kwalolu hlobo lwedivayisi, ...
IFossil izobuyekeza amadivayisi ayo abe yi-Android Wear 2.0 ngoMashi
Inkampani yabenzi bamawashi iFossil imemezele nge-Twitter ukuthi ukuvuselelwa kwamadivayisi ayo kwi-Android Wear 2.0 kuzoba kule nyanga
I-Asus Zenwatch 2 ne-3 zizothola i-Android Wear 2.0 ngo-Ephreli
Ukuvuselelwa kwe-Android Wear 2.0 kwe-Asus Zenwatch 2 ne-3 kuzofika ngenyanga ka-Ephreli, cishe unyaka ngemuva kokwethulwa kwayo ku-beta.
Amadivayisi ezempilo ase-Withings azoqanjwa kabusha ngokuthi i-Nokia
Amadivayisi we-Withings, okuyinkampani esezandleni zeNokia, izobizwa ngeNokia kusukela ngoJuni nonyaka.
Gcina i-Huawei P10 manje bese uthola i-Huawei Watch 2 njengesipho
Lokhu kungenye yalezi zikhuselo ongeke uziphuthe uma ungomunye walabo abacabanga ukuthenga ...
IHuawei Watch 2, inketho entsha nejabulisayo emakethe ye-smartwatch
UHuawei namuhla wethule iHuawei Watch 2 entsha, okuyindlela entsha futhi ethokozisayo emakethe ye-smartwatch.
IHuawei Watch 2 ibonakala ezithombeni eziningi ezivuzekile
IHuawei Watch 2 izokwethulwa ngokusemthethweni e-MWC kepha sesivele siyibonile le divayisi ezithombeni eziningi ezivuzekile.
Abasebenzisi bakwaSony Smartwatch 3 bafuna uSony noGoogle bavuselele amadivayisi ku-Android Wear 2.0
Abasebenzisi be-Sony Smartwatch 3 sebethule isicelo esisemthethweni ku- change.org ukukholisa iGoogle ne-Sony ukuthi bathuthukele ku-Android 2.0
IHuawei izokwethula iHuawei Watch 2 kwaMWC
Inkampani yaseChina iHuawei isanda kuqinisekisa ukuthi izokwethula ngokusemthethweni iHuawei Watch 2, inguqulo yesibili ye-smartwatch sayo sokuqala.
AbakwaLenovo ngeke baqale uhlobo olusha lweMoto 360 kulo nyaka
Ngaphandle kokungabaza akusekho ukubona imiphumela yezinkampani nokuthengisa okutholwe ngamawashi ahlakaniphile….
I-Telegram isiyatholakala ukufaka ku-Android Wear 2.0
Lesi ngesinye sezicelo zokuqala ukutholakala kohlelo olusha lokusebenza lwe-Android Wear olwethulwe ngoLwesithathu olwedlule, ...
I-LG Watch Style ne-LG Watch Sport manje sezisemthethweni
Futhi ukuthi bekumenyezelwe isikhathi eside futhi emahoreni ambalwa adlule singasho ukuthi i-LG Watch ...
NgoFebhuwari 8, iGoogle izokwethula ngokusemthethweni i-Android Wear 2.0, enguqulweni yayo yokugcina, kusasele usuku ngaphambi kosuku obekuhlelelwe ukuthi kuhlelwe ngalo.
Kubukeka sengathi sinezinkinga ngamashaja okungekhona okwangempela futhi okusho ukuthi, yize kunjalo ...
Le kungaba yi-smartwatch elandelayo ye-LG Wear
Isitayela se-LG Watch singesinye samawatchwatches amabili amasha axhunywe yi-LG azokwethula ngoFebhuwari 9 nge-Android Wear 2.0
I-Google yethula i-beta entsha ye-Android Wear 2.0 yonjiniyela
Izinsizwa zakwaGoogle zisanda kukhipha i-beta yesihlanu ye-Android Wear 2.0, i-beta okufanele kube eyokugcina ngaphambi kwenguqulo yokugcina ehlelelwe uFebhuwari 9
I-LG Watch Sport ne-Style entsha ye-LG ibonwa ngaphambi kwesikhathi, iphinde iveze izici zayo eziyinhloko
I-LG isivele inama-smartwatches amabili amasha alungiselelwe, i-LG Watch Style neMidlalo, ongazama ngayo ukungalahlekelwa ubukhona kule makethe.
Izithombe ezintathu ezintsha ze-HTC smartwatch zidaluliwe
Kusuka eTaiwan, izithombe ezintathu ezintsha ze-smartwatch elindelwe kakhulu ye-HTC, imodeli ebesikhuluma ngayo isikhathi esingaphezu konyaka, ziyahlungwa futhi.
Ngokusho kuka-Evan Blass Android Wear 2.0 izokhishwa ngoFebhuwari 9
Usuku olulindelwe lokukhishwa kwenguqulo yokugcina ye-Android Wear nguFebhuwari 9 ngokusho kuka-Evan Blass
Isitayela se-LG Watch ne-LG Watch Sport, amawashi amabili amasha akhiqizwe yi-LG ye-Google
Kubukeka sengathi ngoFebhuwari 9 olandelayo, ngaphezu kokubona i-Android Wear 2.0 entsha, iGoogle inawashi athile alungile ...
I-Android Wear 2.0 iza kuma-smartwatches ahambisanayo ngoFebhuwari
I-Google I / O yokugcina kwaba usuku olukhethwe yi-giant search ukwethula okungaba yi ...
AbakwaSamsung baqala uhlelo lokusebenza ku-App Store ukuze bakwazi ukuphatha iGear S2, Gear S3 kanye neGear Fit kusuka ku-iPhone
Inkampani yaseKorea iSamsung isanda kwethula uhlelo olusemthethweni ku-App Store olusivumela ukuthi siphathe iGear S evela kwi-iPhone
Umkhiqizo wewashi wasenganekwaneni uCasio, wethula iwashi lesibili le-smartwatch
Isizukulwane sesibili se-Casio smartwatch yiCasio WSD-F20, ithuluzi elinezici ezeqa amazinga ezempi
Lolu uhlu lwama-smartwatches azothola i-Android Wear 2.0 ngo-2017
I-Google isivele ilungele i-Android Wear 2.0, ezongena emakethe ngo-2017, futhi lolu uhlu lwama-smartwatches azobuyekezwa.
IGoogle izokwethula ngokusemthethweni ama-smartwatches amabili ane-Android Wear 2017 kwikota yokuqala yonyaka wezi-2.0
IGoogle ilungiselela ukwethulwa kwamawatchwatches amabili amasha kwikota yokuqala ka-2017 futhi lokho kuzofaka i-Android Wear 2.0.
I-Spotify manje isingalawulwa kusuka ku-Samsung Gear S2 naku-S3
I-firm yaseSweden i-Spotify isanda kuvuselela uhlelo lwayo ukuze bakwazi ukulawulwa kusuka ku-Samsung Gear S2 naku-S3
I-Pebble izoqhubeka nokuxhasa amadivayisi ayo ngonyaka ozayo
Inkampani yakwaPebble, ezohlanganiswa neFitbit ngemuva kokuthengwa kwayo, ithi izinsizakalo zayo zizoqhubeka nokusebenza ngonyaka ozayo
Ukubuka kuqala kwesine kwe-Android Wear 2.0 Developer manje sekuyatholakala
Yize ukuthengiswa kokugqokekayo kuqhubeka ngamahora aphansi futhi yi-Apple Watch ne-Samsung kuphela ...
I-Apple yethula izimemezelo ezimbili ezintsha ze-Apple Watch
Inkampani ezinze eCupertino isanda kufaka izikhangiso ezimbili ezintsha esiteshini sayo se-Apple Watch UK YouTube.
IGoogle ithenga iCronologics ukuvuselela i-Android Wear
Inkampani ezinze eMountain View isanda kumemezela ukuthengwa kwenkampani yeCronologics ukukhulisa amakhono e-Android Wear
Kusemthethweni manje. UPebble uvalelisa amakhasimende kuTwitter
Kuleli sonto eledlule kumenyezelwe ukuthengwa kwePebble nguFitbit kwathi uzakwethu u-Ignacio Sala waba ...
UFitbit useyinkosi yemakethe egqokekayo
UFitbit, ikota eyodwa ngaphezulu, useyinkosi ekuthengiseni okugqokekayo, kulandele uXiaomi noGarmin.
Kubukeka sengathi abafana baseSamsung bafuna ukwenza izinto kahle futhi abaqali ukuyeka ukusekela ...
Itshana alikwazi ukumelana nokudonsa kwemakethe futhi lithengwa nguFitbit
Inkampani iFitbit isizothenga ingqalabutho uPebble, inkampani yokuqala yokwethula i-smartwatch emakethe, kodwa eyehlulekile ukuzivumelanisa nezidingo ezintsha
Isizukulwane esisha seGalaxy Gear S3 manje sesiyatholakala ukuze sibhukwe eSpain.
Yayibukeka kanjena i-smartwatch yeNokia Moonraker, iphrojekthi ikhanseliwe
Buka le vidiyo futhi wazi ukuthi iNokia Moonraker ibisebenza kanjani, i-smartwatch ebingaba khona futhi engekho.
Amathiphu ama-5 wokunakekela i-smartwatch sakho futhi ngaleyo ndlela wandise impilo yayo ewusizo
Namuhla sikutshela kulesi sihloko amathiphu ama-5 wezinto eziwusizo kakhulu ukunakekela i-smartwatch yakho futhi ngaleyo ndlela sandise impilo yaso ewusizo esihlakaleni sethu.
I-AT & T ivula ama-oda wangaphambilini we-Samsung Gear S3 namuhla
Opharetha uzolindela okusele ngokuqala kokubhuka noma ukuthenga kwangaphambi kwewashi le-smart firm ...
Ukuthengiswa kwamawashi ahlakaniphile kuyaqhubeka nokwehla
Kuyiqiniso ukuthi sisesikhathini esinzima maqondana nokuthengiswa kwamawashi ahlakaniphile nokuthi awawo ...
Ngokwesifundo sakamuva, i-Apple Watch iyithuluzi elinembe kakhulu
I-Apple Watch ikhombisile ukuthi inenzwa yenhliziyo enembe kunazo zonke phakathi kwamadivayisi ahamba phambili agqokekayo emakethe.
IPolar M200, elinye iwashi elikhethekile ekusebenzeni
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngePolar M200, iwashi elisha likaPolar eligxile ekusebenzeni.
Ividiyo lapho kubonakala khona i-Apple Watch ikhipha amanzi
I-Apple smartwatch evuselelwe, i-Apple Watch Series 2, ingeza ukuvikelwa emanzini futhi njengoba nje ...
Iqiniso ukuthi kulo nyaka asinazo izindaba zamawashi abaluleke kakhulu noma avelele aletha ...
ICoWatch iyi-smartwatch esivela enkampanini ye-IMCO ebonakala ngokuba ne-Alexa njengomsizi ohlanganisiwe ku-smartwatch ...
Abafana abavela ku-iFixit basebenzise i-Apple Watch Series 2 beqinisekisa ukuthi ibhethri lale divayisi linamandla amakhulu kunemodeli yangaphambilini
Lokhu ngumehluko phakathi kwe-Apple Watch Series 2 entsha ne-Apple Watch Series 1
I-Apple Watch Series 2 isivele isemakethe futhi namhlanje siyiqhathanisa ne-Apple Watch Series 1 ebivele ikhona emakethe.
I-Apple yethula isizukulwane sesibili se-Apple Watch
Isizukulwane sesibili se-Apple Watch sibhabhadiswe yi-Apple njengo-Series 2 futhi sisinikeza njengezinto ezintsha ezisemqoka zokumelana ne-GPS namanzi
I-Samsung Gear S3 izobiza amanani angama-euro angama-399 futhi izohambisana ne-iPhone
Kuphela amahora angama-24 ngemuva kokwethulwa kwayo sesivele silazi inani lentengo ye-Samsung Gear S3 entsha nokuthi izohambisana ne-iPhone.
I-Google yehlisa intengo ye-Huawei Watch ngama-euro ayikhulu ku-Google Store yayo
I-Huawei Watch ingenye yama-smartwatches amahle kakhulu emakethe futhi manje i-Google yehlise intengo yayo ngama-euro ayikhulu ku-Google Store.
Izici, ukutholakala nezindaba ze-Samsung Galaxy Gear S3
Lezi yizici, amanani nezindaba ze-Samsung Galaxy Gear S3, iwashi elisha le-Samsung elethwe ku-IFA 2016.
I-Samsung Gear S3 ibonakala ngaphambi nje kokwethulwa kwayo
AbakwaSamsung Gear S3 babonakale ezithombeni eziningi eziputshukile ngaphambi nje kokwethulwa kwabo okuzokwenzeka namhlanje.
I-Huami Amazfit Smartwatch, i-Xiaomi egqokekayo engaveli ku-Xiaomi
Ukufika kwewashi elihlakaniphile nguXiaomi sekukhulunywe ngaye isikhathi eside kanti namhlanje ntambama sine ...
AbakwaSony benza isikhulu seFES Watch U ngezibonisi ezimbili ze-e-ink
AbakwaSony bethule ngokusemthethweni iFES Watch U entsha ozoyithanda ngenxa yezikrini zayo ezimbili zikayinki.
UNike ubukeka ekuqinisekisile ukufika kweGPS ku-Apple Watch 2
Maningi amasango akhuluma namuhla ngezindaba esifuna ukukukhombisa zona namuhla. Kubukeka sengathi ngiyazi ...
IMeizu Mix, i-smartwatch yokuqala yeMeizu manje isemthethweni
IMeizu Mix yi-smartwatch entsha yeMeizu ethulwe ngokusemthethweni yize le divayisi ingeyona obekulindelwe i-smartwatch ...
Kusemthethweni manje; ISamsung Gear S3 izokwethulwa ngo-Agasti 31
Sesibonile imininingwane eminingi nge-Samsung Gear S3 entsha, kepha okwemizuzu embalwa sesivele silwazi usuku lokwethulwa kwalo ngokusemthethweni.
IXiaomi ilungiselela ukwethulwa kwewatchwatch yayo ezoba nentengo ephansi yama-euro angama-135
Kubukeka sengathi iXiaomi ekugcineni izokwethula i-smartwatch emakethe, okuthi ngokusho komhlaziyi owaziwayo waseChina izobiza ngaphansi kwama-euro angama-135.
I-Apple Watch 2 izogcina ukwakheka kwayo, ifake i-GPS futhi isinikeze ukuzimela okukhulu
I-Apple izokwethula i-Apple Watch 2 maduze nje, ezogcina ukwakheka kwayo koqobo, yize izosinika iGPS engcono nebhethri elikhudlwana.
ISamsung Gear S3 entsha izokwethulwa ngoSepthemba 1 ngokusho kokuvuza
ISamunsg ibingayilungiselela iGear S3 ukwethula ngokusemthethweni, futhi ngokuvuza lokhu kungenzeka ngoSepthemba 1 olandelayo.
UZeblaze Cosmo, iwashi lewashi elinamandla, elihle nenani elimnandi
Sivivinye iZeblaze Cosmo, iwashi lewashi elinomklamo othakazelisayo nokucaciswa, kanye nentengo emnandi impela.
Ngabe ngidinga ukuthenga i-smartwatch?
Yize isinqumo sokuthenga i-smartwatch ngesakho wedwa, sizokusiza wazi izinzuzo zokuba ne-smartwatch esihlakaleni sakho ngaso sonke isikhathi
I-Samsung Gear S2 manje isiyasebenzisana ne-iOS
Bekumele silinde isikhashana kodwa ekugcineni iSamsung Gear S2 manje isiyasebenzisana ne-iOS noma okufana namadivayisi we-Apple.
I-Huawei Watch, i-smartwatch esivelele cishe kuzo zonke izici
I-Huawei Watch ingenye yama-smartwatches athandwa kakhulu emakethe futhi namuhla siyihlaziya ngokuningiliziwe kule ndatshana ethokozisayo.
Ngabe ucabanga ukuthenga i-smartwatch? Kulesi sihloko sikukhombisa okhiye abathile namathiphu okwenza ukuthengwa kulungile.
Ama-smartwatches ayi-7 okunika noma ozinikeze wona kulo Khisimusi
Ngabe ucabanga ukuzinika noma uzinikeze i-smartwatch kulo Khisimusi? Kulolu hlu sikunikeza okuhle kakhulu emakethe.
Ngabe unezinkinga ngebhethri le-Apple Watch yakho? Kule ndatshana sikukhombisa amathiphu ayi-10 wokonga ibhethri nokwandisa ukuzimela kwedivayisi.
Lawa ama-smartwatches amahle kakhulu ane-Android Wear
Ama-Smartwatches alapha ukuze ahlale ezihlakaleni zethu futhi lawa ngama-smartwatches ama-Android Wear amahle kakhulu.
Isikhathi Samatshe Amatshe: Lokhu yikho konke odinga ukukwazi nge-smartwatch entsha
I-Pebble yethule i-smartwatch esisha namhlanje ntambama futhi sizokutshela zonke izindaba zayo.
I-athikili lapho sihlola futhi sihlaziye ngokuningiliziwe i-smartwatch ye-Motorola Moto 360, engenye yezimakethe.
Sivivinye iwashi leTomTom Runner Cardio
Ukuhlaziywa kwewashi lezemidlalo le-TomTom Runner Cardio nge-integrated integrated monitor, i-GPS nezinketho zokuqeqesha ezibhekiswe kokufuna kakhulu.
Ungavumelanisa kanjani ikhalenda lakho ne-Android Wear
I-Android Wear uhlelo oluphelele lwe-smartwatch, kepha idatha yokuvumelanisa ingaba yinkinga. Namuhla sikufundisa ukuthi ungakwenza kanjani nge-ajenda yakho.